Fampiofanana CISCO CCNA & Cisco Certifications
1. IPv6 Fanofanana Boots Camp
IPv6 tanjona kendrena ho an'ny toeram-piofanana:
IPv6 Vondron'olona famandrihana basy:
2. Ampiharo ny Cisco Multicast v2.0
Ampiharo ireo tanjona kendren'ny Cisco Multicast v2.0:
Ampiharo ny Cisco Multicast v2.0 Essentials:
4. CISCO CCNP mitaiza sy miova
CISCO CCNP mitrandraka sy manova ny fepetra:
5. CISCO CCNA mitaiza sy mifindra
CISCO CCNA Security Essentials:
Cisco CCNA no mpisava lalana manerantany ao amin'ny IT izay manampy ireo orinasa haka ny mety ho vintana amin'ny ampitso amin'ny fampisehoana izany zava-mahagaga izany dia mety hitranga rehefa mampifandraisina ny olona navotsotra mialoha.
Ao amin'ny Cisco, ny mpanjifa dia manomboka ny zava-misy ary ny singa tena lehibe amin'ny ADN dia mampitombo ny fikambanan'ny mpanjifa ary miara-miasa amin'izy ireo mba hamantatra ny fepetra takian'izy ireo ary hanome fandaharana izay manohana ny firoboroboany.
Ny hevitra momba ny fandaharana natao ho an'ny adihevitra momba ny mpanjifa manokana dia niaraka tamin'i Cisco hatramin'ny nanombohany. Mpivady Len Bosack sy Sandy Lerner, izay samy niasa tao amin'ny Stanford University, dia samy nila nifampidinika avy amin'ny sehatra iraisam-pifaneraseran'izy ireo tao anatin'ny sehatra samihafa saingy tsy afaka noho ny tsy fahampiana vaovao.
Ny fanavaozana dia tsy maintsy atao amin'ny fitantanana ny disadisa manodidina; ary vokatry ny fandalinana ny fitsapana azy ireo - ny famolavolana tetikasa maromaro no noforonina.
Ny sasany amin'ireo Cisco CCNA Training Course & Certifications dia voalaza etsy ambany:
Diagram Ny fampidirana ny IPv6 Bootcamp (IPv6) Ny fandaharam-pianarana Cisco momba ny Fangatahana dia natao hanampiana ireo takelaka izay mahafantatra ny IPv4 miara-miasa sy mivezivezy mba hahatakatra ny fahasamihafana amin'ny IPv6 izay miompana amin'ny fikarakarana sy fitantanana.
Ny fanombohana dia manomboka amin'ny fanazavana ny fanombohan'ny IPv6 ho an'ny rafitra, ary koa ny fivoriambe vaovao hafa ao amin'ny IPv6 izay mamindra ny adiresin'ny Resolutions Resolutions (ARP) sy ny Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP, ohatra ny IPv6 Neighbor Discovery Protocol (NDP).
Ny karazana IPv6 misy karazana miavaka dia hodinihina miaraka amin'ny tanjona izay ahafahanao mamantatra ny fomba ahafantarana ny fifanoherana eo amin'ny IPv6 multicast, ny interface eo akaiky ary ny adiresy tokana.
Ny fiheverana taloha, ireo modules ireo dia mahatsapa ihany koa ny fahatarana amin'ny IPv6 dia mahazo ny rakitra sy ny lalam-pitarihana miaraka amin'ny Routing Information Protocol (RIP) ho an'ny IPv6 (RIPng) ary ny Open Short Path First (OSPF) ho an'ny IPv6 (OSPFv3).
Ity fampianarana ity dia natao ho an'ny manam-pahaizana manokana izay mila fahatakarana bebe kokoa ny IPv6.
Raha vao vita ny fianarana dia tokony hanana ny fahaizana:
Amboary ny adiresy IPv6 maneran-tany sy ny adiresy manokana amin'ny fifandefasana switch
Diniho ny fizotran'ny autoconfig ary ny fomba fiasan'ny EUword-64-teny fitenin'ny ID © 2016 Cisco sy ny famoahana azy.
Omeo ny fikarakarana ny fifandraisana amin'ny faritra akaikin'ny faritra
Ampiasao ny rendrarendra ahafahana mahita ny famoaham-baovaon-tserasera sy ny famoaham-baovaon'ny mpifanolo-bodirindrina taorian'ny IPP6 ping
Ampifanaraho amin'ny OSPFv3 mampiasa faritany maro, ohatra, zana-kavoana ary tsy tena marika loatra (NSSA)
Mampifanaraka ny OSPF mpifanolo-bodirindrina noho ny tsy fandehanan'ny radio tsy miankina maro dia mahazo mankany (NBMA) fandaminana famindrana rindrina
Ampidiro RIPng amin'ny IPv6
Manaova famoahana mivantana amin'ny OSPFv3 amin'ny RIPng
IPv6 Boot CampFepetra takiana:
Alohan'ny handraisanao ity dingana ity dia tokony hanana fahafahana hanao izany ianao:
Lazao ny fototry ny fikarakarana ary mamorona LANs mivantana
Hametraka ny fahazoana Internet
Manana mari-pankasitrahana CCNA®, na mitovy
Miantefa, mijery ary manadihady ny RIP, ny Fahaizana IGRP (EIGRP) ary ny OSPF
Lazao ny teboka parcel IPv4
Lazao ny Protocols an'ny Internet Control Protocol (ICMP) sy ny ARP
Ny fanatanterahana ny Cisco Multicast (MCAST) v2.0 dia five-dai-pampianarana fanabeazana momba ny fahaiza-manao an'ny multicasting IP, izay ahitana ny fampiharana multicast, loharano, mpandray, fitantanana iombonana, ary fivoriambe iraisam-pirenen'ny IP (ohatra Protocol Independent Multicast, PIM) ampiasaina ao anatin'ny faritra iray voafetra (intradomain). Ny olana momba ny fifanakalozan-kevitra momba ny LAN sy ny IP maro dia azo antoka koa.
Ny fianarana dia manome valiny manokana ho an'ny fandaminana mivantana ny multicast IP ao anatin'ny mpamatsy na ny orinasa. Ny fandaharam-pampianarana dia manome fitsipika sy fitsipika momba ny fampiasana ny multicast IP amin'ny Cisco switch. Ny labs dia manome fahatakarana ny traikefa an-tanana izay andrasana handefasana ny IP multicast.
Rehefa vita ny fianarana, dia hanana fahafahana hihaona amin'ireto tanjona ankapobeny ireto ny mpianatra:
Ny fitantanana ny IP multicast amin'izao fotoana izao, mba hanombanana ny modely mahasoa ny multicast IP ary ny fampisehoana dia maneho amin'ny IP multicasting, dia manaiky ny tombontsoa iraisana IP sy ny provisos mifandraika, ary manapakevitra ny karazana fampiharana samihafa miaraka amin'ny tanjona voafaritra tsara mba hahatakarana ny modely IP etsy système Ny toerana misy multicast mivantana amin'ny fampahalalana dia mampifandray ny adiresy lafo, ary manenona ireo fitaovana handaminana streams multicast ao amin'ny sehatra LAN.
Ny Protocolo tsy miankina Independent Multicast (PIM-SM) no anisan'ny fivoarana indrindra amin'ny fivoaram-piofanana mahazatra indrindra amin'ny IP mba handraisany ny fenitry ny fivoriambe sy ny singa miavaka, mahazo aina tsara amin'ny famaritana ny fametrahana ny fivoriambe multicast, ary mandamina sy mandefa PIM- SM amin'ny orinasa maro samihafa IP manangana.
Ny fampahalalam-baovao sy ny fahaiza-manao ilain'ny mpianatra iray alohan'ny handehanana amin'io dian-tongotra io dia toy izao manaraka izao:
Cisco Certified Network Associate (CCNA) fanamarinana.
Mianara ny fahaiza-misaina sy ny fandaminana ny Cisco switch sy LAN switch.
Manatanteraka ny Cisco IP Routing (ROUTE).
Ny Cisco Data Center Specialist Specialist Mpanentana Fanampiana dia natao hanandramana ny fampahalalana ny mpianatra momba ny fototry ny Cisco Unified Computing System sy ny fahafahany mamerina tontolo manodidina ny tontolo iainana virtoaly. Ny Cisco Data Center manam-pahaizana manokana momba ny informatika manam-pahaizana manokana dia hotsaraina toy izany koa amin'ireo tapany hafa:
Famantarana ny Cisco Unified Computing System B sy C Series
Cisco Unified Computing System amin'ny fandefasana toeram-pambolena fandefasana toeram-pivarotana sy famadihana ny rafitra
Afindrao ny fianakaviana Cisco Nexus.
Cisco Certified Network Professional (CCNP) Manomana sy manamarina ary manadihady ny tambajotram-pifandraisana midadasika sy malalaka ary miara-miasa amin'ny manam-pahefana amin'ny fisorohana ny fiarovana, ny feo, ny fandaharana ary ny lahatsary.
Ny CCNP Manara-maso sy manova ny mari-pamantarana dia mety ho an'ireo tsy ampy herintaona amin'ny fihaonan'ny fitantanana ny rafitra ary miomana ny hampandeha ny fahaiza-manaony sy hiasa amin'ny fomba mahomby amin'ny fandaminana rafitra.
Ireo olona izay nahavita ny CCNP Routing and Switching dia nampiseho ny fahaiza-manao ilaina amin'ny sehatra ara-barotra lehibe, ohatra, mandrindra ny famolavolana, ny fananganana fananganana, ny rafitra mpanamboatra na ny manam-pahaizana momba ny rafitra.
Ny fametrahana sy famerenana ny fampahafantarana ny fivoriambe avy amin'ity fanamarinana ity dia hanome fananganana maharitra satria ireo sehatra ireo dia mitovy amin'izany ao amin'ny tambajotra ara-batana amin'izao fotoana izao ary ireo singa mifantoka amin'ny alàlan'ny virtoaly rahampitso.
Cisco CCNA Manara-maso sy manova ny mari-pamantarana na ny mari-pankasitrahana Cisco CCIE dia afaka miditra amin'ny maha-zava-dehibe azy.
Raha toa ka mikirakira ireo modely mifototra amin'ny solosaina ny orinasa, ny ampahany sy ny fahaiza-manao ilain'ny manam-pahaizana momba ny rafi-pitantanana ao an-toerana dia mandroso sy manan-danja kokoa noho ny fotoana hafa ao anatin'ny fahatsiarovana vao haingana.
Raha te-hanamboatra an'ity rafitra ity ianao, ny CCNA Routing sy Switching certification dia tsy hametraka anao fotsiny amin'ny fianarana fandrosoana fototra, nefa manome toky anao fa mifantoka amin'ny fahaiza-manao fitakiana takiana amin'ny fampiasana fanavaozana vaovao.
Ny Cisco Certified Network Associate Voice (CCNA Voice) dia mankasitraka ny fampahalalana momba ny lanjany sy ny fahaiza-manao ilaina amin'ny fanaraha-maso ny feo. Ny fanamarinana Cisco CCNA Voice dia manamafy fa ny fahaiza-manao ilaina omena ny ampahany manokana amin'ny fizarana ny feo amin'ny feo avo, ohatra, ny feo haingon-doha, ny manampahaizana feo, ary ny talen'ny feo. I
T mankasitraka ny fahaiza-miasa amin'ny VoIP vaovao, ohatra ny IP PBX, fifandraisana IP, telefaona, fanaraha-maso fiantsoana, ary fandaharana hafatra an-tariby.
Ny fanamarinana CCNA Voice dia manadihady ny fahaiza-manaony sy ny fampahalalana fantatra amin'ny Cisco Unified Communications Manager. Azo ampiasaina amin'ny fikambanana goavana, ohatra, ny governemanta, fikambanana goavana, ary oniversite.
Ankoatra izany, ny mari-pankasitrahana CCNA Voice dia manadihady ny fahaiza-manao sy ny fianarana voafaritra miaraka amin'ny Cisco CallManager Express (CME) sy Cisco Unity Express (CUE) fandaminana tsy tapaka ampiasain'ny fikambanana tsy dia misy firy ary kely, ohatra ny fikambanana miaraka amin'ny solontenan'ny 2,000, fikambanan'ireo varotra, ary sekoly kely faritra.
Ny Cisco CCENT manan-danja, ny CCNA Routing sy ny Fifindrana na ny mari-pankasitrahana Cisco CCIE dia afaka mandeha ho toy ny zava-dehibe.
Ity fanadinadinana ity dia manamafy fa ny fanantenana antenaina dia manana ny fianarana sy ny fahaiza-manao manan-danja amin'ny:
Mandamina ary manatanteraka ny fanaraha-maso serivisy amin'ny orinasam-pambolena miara-miasa sy mifototra amin'ny tambajotra
Ampiasao ireo fomba fanao mifototra amin'ny fanavaozana sy fomba fanao ITIL mifanentana amin'ny fanatanterahana ny fandaharan'asa
Ny dingana manaraka dia ny fanofanana voafantina amin'ity fanadinana ity.
Fanodinkodinana sy fanaraha-maso IP Networks (TSHOOT)
Ny Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security) dia manaiky ny fianarana ambony sy ny fahaiza-manao ilaina amin'ny fiarovana ny tambajotran'ny Cisco.
Miaraka amin'ny fanamarinana CCNA Security, ny rafi-pananana dia mampiseho ireo fahaiza-manao ilaina amin'ny fananganana rafitra fiarovana, mahita ireo loza sy fahalemena amin'ny tambajotra, ary ny loza mitatao amin'ny fiarovana.
Ny modely fanabeazan'ny CCNA Security dia manamafy ny fanavaozana fiarovana amin'ny foibe, ny fametrahana, ny fitsabahana sy ny fandinihina ny fitaovana gadriandro hikarakarana ny fahitsiana, ny tsiambaratelo ary ny fahazoana ny vaovao sy gadget, ary ny fahaiza-manao amin'ny fandrosoana izay ampiasain'i Cisco ho ampahany amin'ny rafitra fiarovana azy.
Ny Cisco CCENT ara-drariny, ny CCNA Routing sy Switching, na ny fanamarinana CCIE dia afaka mandeha ho toy ny tena ilaina.
Ny 3 IBM Fampiofanana ho an'ny tsirairay ao amin'ny orinasa dia tokony hampiasa